Darjeeling News, Kalimpong News, Kurseong News, Darjeeling Hills, Gorkhaland News by Darjeeling Times – दशैं…..
Oct 17, 2016 DT Admin Have your say Comments Off on दशैं…..
– चन्द्र भण्डारी, रेलिङ।
एक समय थियो बर्खाको हिले दिनहरु सुकिलो बनेर जब शरदको सुगन्ध गाउँ घर बहन्थ्यो हाम्रो पनि सुकिलो दिनहरू फेरी एकचोटी ढोकाबाट छिर्थ्यो। बर्षमा एकचोटी नयाँ पहिरनको बास्नाले यो बालहृदय कत्ति रोमान्चित बन्थ्यो मानो कस्तूरी हो, सूँघि रहूँ जस्तो लाग्थ्यो। टिकाको दिन आऊँने प्रतिक्षा कति कष्टकर बन्थ्यो। दशैं जीवनमा यतिसारो महत्वपूर्ण कि घरमा नयाँ सालको क्यालेन्डर आउने बित्तिकै दशैं कहिले छ खोजि हालिन्थ्यो। सायद दशैंले बर्षमा एकैपल्ट भए पनि सम्पन्नताको आभाष दिंदो हो। गाउँको हरेक घरमा उल्लाससँग खसी, सुंगुर, राँगा पाकथ्यो, रेडियोले मालसीरी गाएको धुन हजुरबाहरु ब्याट्री घाममा सुकाई सुकाई सुन्थे, तासको पत्ताहरुसँगै न्यानो आफ्नोपन बाँड्थे। साँच्चै दशैंले नयाँ उल्लास छर्थ्यो गाउँमा। नयाँ लुगाको शानमा टिका लगाउनु जाँदाको पुलकित मन कहाँ कहाँ उड़थ्यो। टिकामा पाएको पैसा कहिले कुलेसोतिर गई गनिहालूँ हुन्थ्यो। ती आशीर्बाद स्वरुप पाएको दक्षिणामा कति धेरै सपना बुन्थ्यौं हामी। बेलुकी भरिएको साँझ आउँदा खल्ती भरी बलून, पिस्तौल,डीपगोली पाउँदा आफैमा कति बिभोर भइन्थ्यो।
सानो इच्छा तर कति धेर आनन्द, आज धेरै आकांक्षाहरुमा थिचिएको खुशीमा फेरी त्यही खल्तिमा डिपगोली बज्दाको खुशी पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। गोजीभरी रेसलिङको कार्ड हुँदाको अभिमान फेरी पलाए हुन्थ्यो झैँ लाग्छ। त्यस्ताक आशीर्वाद भन्दा दक्षिणा ठुलो लाग्थ्यो आज कसैले दक्षिणा होइन बरु मन भरीको आशीष दिउँन जस्तो लाग्छ। समयानुकूल जीवन आफै आफ परिमार्जित बन्दै जाँदो रै’छ। सायद हिजलाई फेरी भेट्न नसक्नु नै जीवन हो , बर्तमान अनि भोलीलाई बाँचेर अघि बढ़नु नै जिउँनु हो। हामीले बाँचेका ती दिनहरुको मिठो अनुभूतिहरु आज वर्त्तमान बालपीढ़ीले महसूस गर्छन् गर्दैनन् थाहा छैन तरै पनि आजको कम्प्यूटर अनि स्मार्ट फोनहरुको स्क्रीनमा ती अलौकिक बाल अनुभूतिहरु खोजेर मिल्दैन यो पक्का हो।
जब सुनौलो घामको छटा पहाड़ को थुम्का थुम्का अनि पाखा भरी पोखिन्थ्यो दशैंको रौनकता गाउँभरी मित्रता, भाईचारा, आत्मीयता बनि दलान दलान डुल्थयो। आँगन आँगन हर्षको बिस्कुन फिजिईन्थ्यो। जात धर्म सम्प्रदाय भूली सिंगो गाउँ आत्मीयताको लिङगे पिङमा झुल्थयो। कन्दराहरु च्याब्रुङ मादल डम्फूमा सौहार्दता सुसेल्थे । दशैं जातीय एकताको प्रतीक बन्थ्यो। जातीय सदभावना पहाड़को निधारमा झलमल्ल हाँसेको हुन्थ्यो। आफन्त त आफन्त भईगए, ठुला बड़ाको साथलागी नौडाँडा पारी मितेरी साइनोले जोड़ेको घरमा पनि खहरे खोलाहरुको बाँसको फड़केमा तितेपाती चड़ाउँदै गएको ती मिठो यात्राहरु आज सपना झैँ लाग्छ। कति गहिरो थिए ति सम्बन्ध अनि आत्मीयता। आज त्यही दशैंको हर्षोल्लास त्यही आत्मीयता कही कतै बिलाए झैँ कतै हराए झैँ आभाष हुन्छ। आफ्नो पहुँचको परिधि जति फैलिन्दै जान्छ मान्छे भने सायद त्यति नै संकोचित बन्दै जाँदो रैछ। हुनसक्छ वैश्विकरणको रमझमे मेलामा हामीले आफैलाई संकीर्णताको गल्छेंड़ीतिर हराई रहेछौं।
हो संसारमा केहि पनि स्थायी बनि रहन सक्दैन यो अकाट्य सत्य हो। धर्म संस्कार संस्कृति पनि यसदेखी अछून्न रहन सक्दैन, परापूर्व कालदेखि संसारको सबै परम्परा संस्कृति परिवर्तित अथवा परिमार्जित बन्दै आएकै छ। परिवर्तन अनि परिमार्जनको यो प्राकृतिक घटनाक्रममा हाम्रो यो मिठो रसिलो सांस्कृतिक धरोहर एकदिन कतै डायनासोर कै कथा त बन्दैन, सम्झँदा मन कटक्क खाएर आउँछ।
Pradeep Kumar Sunuwar - Writer, Poet, andaCancer Survivor "Senterem 3" by Pranesh Rai
21,221 total views, 1,060 views today
37,432 total views, 1,059 views today
SpiceJet to launch operations from Sikkim from October 4. SpiceJet’s ninth UDAN destination. They will be operating daily direct flights on Pakyong-Kolkata and Pakyong-Guwahati route 37,460 total views, 1,060 views today Comments comments
37,460 total views, 1,060 views today
37,422 total views, 1,058 views today
37,431 total views, 1,058 views today